Global Voices teny Malagasy » Taratasy avy amin’ny bilaogera Ejipsiana iray manao fitokonana tsy hihinan-kanina taorian’ny fanagadrana sy fampijaliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Taratasy avy amin'ny bilaogera Ejipsiana iray manao fitokonana tsy hihinan-kanina taorian'ny fanagadrana sy fampijaliana
Voadika ny 12 Janoary 2019 6:03 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Ejipta, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Mey 2008)
Ity manaraka ity ny dikantenin'i Amnesiac  momba ny taratasy nalefa tamin'ny fihetsiketsehan'ny Sendikàn'ny mpanao gazety  momba ireo olona voatazona am-ponja noho ny fitokonana tamin'ny 6 Aprily, anisan'izany ilay bilaogera Kareem El Beheiry :
Izahay, gadra politika telo ato amin'ny fonjan'i Borg el-Arab ao Alexandria, dia mandefa ny taratasy eto ambany ho an'ny Klioban'ny mpitsara sy ny filohany Zakareya Abdel Aziz …
Herinandro izay no lasa tamin'ny fitokonanay tsy hihinan-kanina ary tena malemy tanteraka izahay. Miantso anao farany sy tokana izahay, ho an'ireo rehetra iharan'ny tsy rariny aty Ejipta.
Tianay aloha ny hanitsy vaovao sasantsasany izay tonga tamin'ny gazety milaza momba (anay telo) izay voalaza fa nafindra tany amin'ny hopitalin'ny fonja noho ny fitokonanay tsy hihinan-kanina.
Ny marina dia mbola aty am-ponja izahay rehefa tsy nety niantso fiara mpamonjy voina hitondra anay any amin'ny hopitaly ny governemanta, noho ny tsy fahafahan'i Karim el-Beheiry sy i Tareq Amin mitsangana – sy noho ny fahalemena goavana mahazo azy ireo. Fa nampanantsoina kosa ny “mpanampy mpitsabo” iray nantsoina hijery an'i Karim, izay niharatsy tanteraka ny toe-pahasalamany.
Te hahalala ny antony mbola hijanonanay aty am-ponja izahay. Hanohy ny fitokonana tsy hihinan-kanina izahay mandra-pahafatinay na mandra-pahazoanay izany vaovao izany.
Nampijaliana tao amin'ny foiben'ny fiarovam-panjakana ao Mahalla izahay ny 6 sy 7 ary 8 aprily. Nampijaly an'i Karim ireo mpiandraikitra tamin'ny alàlan'ny fampiasana herinaratra raha nompaina sy niharan'ny herisetra ara-batana kosa i Tareq Amin sy i Kamal el-Fayyoumy. Nandany iraikambinifolo andro tao amin'ny fonjan'i Borg el-Arab izahay avy eo tao anaty efitrano natao ho an'ireo mpanao heloka bevava. Rehefa nandidy ny hamotsotra anay ny fitsarana Tanta dia notazonina nandritra ny efatra andro tao amin'ny paositry ny polisy El-Salam [noqtat shorta] teo anelanelan'i Mahalla sy Tanta izahay talohan'ny nitondrana anay tany amin'ny fonjan'i Borg el-Arab izay nanombohanay ny fitokonana tsy hihinan-kanina.
Avy aty amin'ny fonja misy anay, miantso anao sy ny tontolo politika rehetra izahay mba handray andraikitra sy hanao fanerena mba hiantohana ny famotsorana ireo rehetra nogadraina noho ny hetsika tao Mahalla.
Mpiasa voatazona tao Mahalla
Fonjan'ny Borg el-Arab
Tsanganana 22, Efitra 5
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/12/133323/
 taratasy nalefa tamin'ny fihetsiketsehan'ny Sendikàn'ny mpanao gazety: http://www.gaberism.net/2008/05/19/letter-from-the-mahalla-detainees/
 Kareem El Beheiry: http://egyworkers.blogspot.com